Sammubani, Author at Ibsaa Jireenyaa - Page 40 of 62
January 3, 2019 Sammubani Leave a comment
Abbaa Manaa Kee Akkamitti Filattaa? -Kutaa 2ffaa
Kutaa darbe irraa itti fufuun har’as shamarran maatii ijaaru barbaadan abbaa manaa akkamii akka filatan ni ilaalla. Barruun tuni dubartoota qofaaf osoo hin ta’in dhiirotaafis kan taatudha. Dhiirri “Amaloota barruu tana keessatti tarreefaman nan qaba moo hin qabu?” jechuun of qorata. Ergasii, dadhabinna isaa ni jabeessa. Haalumaa kanaan barruuleen “Niiti tee akkamitti filatta?” jedhaniis, dubartootaaf kan ta’uudha. Achi keessatti of ilaalun of madaalu. Yoo akkana godhan, yommuu jireenya fuudhaa heerumaa keessatti wal qunnaman haala gaariin waliin jiraachuuf karaa isaaniif laaffisa. Yeroodhaan akka of qopheessan isaan taasisa. Kanaafu, obboleeyyan keenya hin fuudhiniii fi hin heerumin, tuqaalee kanniin ilaalun of haa jajjabeessan. Eeti, amaloota barruulee kanniin keessatti tuqaman hin qabu yaanni jedhu sammuu namaa qaxxaamuru danda’a. Garuu yeroo keessaa waan fooyyessitaniif abdii hin kutinaa. Guyyaa Guyyaan hanqinna qabnu foyyeessuf yoo carraaqne, In sha Allaah guyyaa tokko nama amaloota kanniini faayamu taana. Amma gara Amaloota Abbaa manaatti deebi’uun itti haa fufnu.
December 31, 2018 Sammubani Leave a comment
Niiti Tee Akkamitti Filattaa?-Kutaa 3ffaa
Adeemsa jireenyaa keessatti namni marsaa dargaggummaa irra yommuu gahuu humni guddaan keessa isaatti dhooya. Humni kunis humna gara fuudhaa heerumaatti isa dhiibudha. Fedhii uumamaa guuttachuuf karaan sirriin fuudhaa heeruma akka ta’e ni amana. Garuu dhimmichi fedhii foonii guuttachu qofa osoo hin ta’in kaayyoo guddaa san caalu qaba. Sanyii gaarii horuun maatii gaarii ijaaru fi gandoota lamaanitti milkaa’udha. Dhimmi yoo akkana ta’e, dargaggeessi fuudhaaf yaadu, “Dubartii akkamii yoo fuudhe, galma yaade gahaa?” jechuun yaada. Torbaan darbee keessatti amaloota gaggaarii dubartii kaayyoo guddaa kana galma akka gahuuf dhiira gargaartu ilaalle jirra. Har’as itti fufuun amaloota hafan ilaalla.
Ilmaan namaa yommuu jireenya tana keessa jiraatan gaafin akkana jedhuu yeroo hundaa sammuu isaanii quuqa. “Eessa deemaa jiraa? Xumurri ykn gahuumsi kiyya eessaa? Du’ee achumaan nan badaa?” Kuni gaafi guddaa deebii barbaadudha. Namni gaafi kanaaf deebii argate, jireenya keessatti tasgabbiin jiraata. Sababni isaas, gahuumsa itti deemu waan beekuf. Kanaafi, namoota Rabbii fi Guyyaa Aakhiraatti amanan tasgabbaa’oo fi abdii kan hin kunne ta’anii argina. Balaa ykn gadda cimaa keessa yommuu ta’an, wanta abdatan tokko qabu. Yommuu hojii gaggaarii hojjatan wanta kajeelan tokko qabu. Yommuu nafseen isaanii gara baditti isaan kakaastu, wanta tokko sodaachun of qabu. Kuni hundii jireenya keessatti aannan tasgabbii akka dhugan isaan taasisa.